Light Box ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် - DiGuang သည် Lattice Backlit LED ကိုတရုတ်တွင်ပျံ့နှံ့စေသည်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > LED မီး Box ကိုအလင်းရောင် > နောက်ခံအလင်းရောင် > Light Box အတွက် Lattice Backlit LED Diffused
Patent Design Light Box အတွက် Lattice Backlit LED Diffused is specialize for advertising and signage industry. Offer various color temperature, CRI, LED chips and length options. 80% Energy saving and environmental protection compare with traditional fluorescent lamp. As one of the most professional LED strip for advertising light box manufacturers and suppliers in China, we're featured by quality products and custom service.
စိတ်ကြိုက် 12pcs SMD2835 LED
12000K - 14000K, စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
175 ဒီဂရီ PMMA မှန်ဘီလူး
950 x ကို 17 x ကို 1.0
1. မြင့်မားသောထိရောက်မှုကို LED SMD2835 chip ကို;
2. Light Box အတွက် Lattice Backlit LED Diffused, lit without delay, fast response;
၃။ ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်ဖြင့်လုံခြုံပြီးစိတ်ချရသောစဉ်ဆက်မပြတ်သောဗို့အား 24V DC ရှိသည့်မှန်ဘီလူးကိုမွေးစားပါ။
၆.၅ - ၁၅ စင်တီမီတာအနက်ရောင်ထည်အလင်းသေတ္တာအတွက်အကောင်းဆုံး။
1. 2.5 - 15cm အထူနောက်ခံအလင်းထည်အလင်း box ကို
၂။ မိုဘိုင်းကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ၊ အပြင်ပန်းသင်္ကေတများ၊
၃။ နံရံကပ်အလှဆင်ခြင်း၊ မြေအောက်ရထားဘူတာ၊ ဘတ်စ်ကားနှင့်အခြားကြော်ငြာမီဒီယာမီးသေတ္တာအလင်းရောင်။
၂။ Diguang LED နှင့်၎င်း၏ပစ္စည်းများ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။
Diguang LED is one of professional Light Box အတွက် Lattice Backlit LED Diffused manufacturers. We have already cooperated with world wide customer and most of them located in Europe, North America and Mid-east. We have 10 years experience with the LED Backlit Lattice Strip andasales team.
အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ISO 9001: 2000 အသိအမှတ်ပြုစက်ရုံတွင် LED light bar တစ်ခုစီသည်သင်၏အရည်အသွေးစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီစေရန်တိကျသော QC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။
LOGO ကိုအလင်းသို့မဟုတ်အထုပ်တွင်ပုံနှိပ်။ ရပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုပေး။ LOGO ကိုသင်၏တောင်းခံမှုအားဖြင့်အလင်းနှင့်အပြင်အထုပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပုံနှိပ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအတွက် ၂ နှစ်နှင့် ၃ နှစ်အာမခံပါသည်။ Diguang ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးပြသနာများကိုပြသရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိပါကကုန်ပစ္စည်းအသစ်များအားကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်ရသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်အစားထိုးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် DHL၊ UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် TNT ဖြင့်ပို့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ ရက်မှ ၃ ရက်ခန့်ကြာသည်။ လေကြောင်းလိုင်းနှင့်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလည်းလက်ခံနိုင်သည်။
24v မီးပွိုင့်အတွက် LED မီးနောက်အစင်း